Dagaallo cadowga lagu jabiyay.
Waxyeellooyin cadowgu u gaystay dadwaynaha.
JWXO oo Qaramada Midobey baaq u dirtay.
Khudbad la xidhiidha sanadguurada 23aad ee aas-aaskii JWXO oo uu soo jeedinayo Gudoomiyaha H/Warfaafinta ee JWXO.
Wariyaha RX uga soo warrama xarunta dhexe ee JWXO ee dalka Ogaadeenya ayaa noo soo sheegay dagaallo dhawr oo dhex maray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya oo si wayn loogu waxyeelleeyay ciidammada dac-darraysan ee gumaysiga. Dagaalladaasi waxay u dheceen sidatan;
10/08/07 weerar gaadmo oo CWXO ku qaadeen kuwa gumaysiga ka tirsan oo marayay meesha lagu magacabo Malqaqa, oo Galaalshe u dhaw, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 2 askari, 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/08/07 weerar sidoo kale ay CWXO ku qaadeen kuwa cadowgu leeyahay oo ku sugnaa Tantoomi, oo Dhagaxmadow ka tirsan, waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 5 askari, 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
07/08/07 cutub ka tirsan CWXO ayaa waddada u galay kolonyo ciidammada gumaysiga ah oo marayay Karinka Soolle, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxayna ka dileen 5 askari, 4 kalana way ka dhaawaceen.
Isla 07/08/07 fallaadh ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ah ku qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Dhagaxmadow, waxay u gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Dhinaca kale markii ay taariikhdu ahayd 06/08/07 waxaa ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay degmada Dannood ka goostay 5 askari oo la filayo inay u goosteen dhinaca Soomaaliya.
Ciidammada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ayaa waxyeellooyin, dil iyo xidhay isugu jira, u gaystay dadwaynaha rayadka ah ee Ogaadeenya.
Markii ay taariikhdu ahayd 06/08/07 waxay ciidammada gumaysigu degmada Dannood ee gobolka Doollo ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabi jiray Wacdi Maxamuud Cabdi.
13/08/07 waxay ciidammada gumaysigu si naxariis darro ugu dileen magaalada Wayla-lagu-xidh 5 nin oo shacab ah oo ay gawraceen. Waxay sidoo kale dhaawac xun u gaysteen nin kale oo isaguna raggaas la socday oo hadda xaaladdiisa caafimaad aad u liidato. Nimanka ay ciidammada cadowgu gawraceen waxay kala yihiin;
1- Bile Faarax Xuseen
2- Maxamed Faarax Xuseen
3- Khadar Xasan Baddal
4- Asad Badar Gaaleri iyo
5- Nin aanaan magaciisa haynin
Ninka dhaawaca ahna waxaa lagu magacaa Nuur C/qani Joofil.
12/08/07 waxay ciidammada cadowgu magaalada Gabagabo ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabi jiray Tuurre Ibraahim Maxamuud.
09/08/07 magaalada Waafdhuug waxay cidammada gumaysigu ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabo Anwar Ibraahim Maxamed.
05/08/07 waxay sidoo kale ciidammada gumaysigu magaalada Caabudwaaq ee dalka Soomaaliya ku dileen nin soomaalida Ogaadeenya ah oo lagu magacaabo Maxamed Guulle Dhagacadde.
08/08/07 waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen, isla markaana jidhdil ba�an magaalada Birqod ugu gaysteen dad rayad ah oo ay ka mid yihiin;
1- Sh Maxamuud Axmed Shariif
2- Sayid Axmed Sayid Muxumed
3- Qalinle Faarax Waylaaq
4- Aamina Muxumed Nuur Sh Xasan
5- Caasha Jaamac Dayr
6- Xaliimo Cabdi Yuusuf
7- Cibaado Axmed Daweeye iyo
8- Xasan Maxamed Cabdi Barre.
04/08/07 Koora-celiska Dharkenley waxay ciidammada gumaysigu ku xidheen gabadh lagu magacaabo;
1- Ardo Dayib Xuuble
30/04 � 01/8/07 waxay ciidammada cadowgu magaalada Dhagaxbuur ku xidhxidheen dadwayne rayad ah oo tiradoodu kor u dhaaftay 400 oo qof. Qaar dadkaas ka mid ah ayaa la sheegay in maxkamad la saaray oo lagu xukumay hal sano oo xadhig ah. Dadkaas waxaa ka mid ah;
1- Ayaan Siyaad
2- Ifraax Xaaji Cali iyo
3- Muxubo C/raxmaan
Waxaa iyaguna ka mid ah dadka ku xidhxidhan magaalada Dhagaxbuur;
1- Dawad Sooyaan
2- Faadumo Aw Cali
3- Canbaro Maxamed Madoobe
4- Nimco Maxamuud
5- Ifraax Xasan Nuur
6- Nuura Muxumed Nabadiid
7- Amaal Muxumed
8- Nimco Cabdi Jaamac
9- Calan Cabdi
10- Maxamed Nuur Khaliif
11- Nuur Maxamed Kaahin
12- Xuseen oo magaciisa buuxa aanaan haynin
13- Khadar Xiime
14- Xasan Sh Cabdi
15- Dakharre Axmed Samatar
16- Bashiir Macalin Xasan
17- Khadar Xuseen
18- Muxumed Daahir
19- Macalin Bashiir Axmed
20- Axmednuur C/llaahi
21- Muxumed Cabdi Foollow
22- Xuseen Cabdi Faarax
23- Maxamed Gaboobe
24- Mustafe oo magaciisa buuxa aanaan haynin
25- C/naasir Shariif C/llaahi iyo
26- Shariif C/llaahi Shariif Kurtun
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya ayaa bayaan ay soo saartay Qaramada Midoobey kaga codsatay inay guddi xaqiiqo raadis ah u dirto dalka Ogaadeenya, si ay u soo baadhaan denbiyada bani�aadamnimada ka baxsan ee ciidammada Itoobiya ka galayaan dadwaynaha rayadka ah ee Ogaadeenya.
Bayaanka waxay JWXO ku sheegtay inay rajaynayso in guddigan xaqiiqo raadiska ahi uu gacan ka gaysan karo sidii Meles Zenawi iyo masuuliyiinta la shaqeeya dusha looga saari lahaa denbiyada dagaalka ee ay Ogaadeenya ku galeen.
JWXO ayaa bayaankan ku sheegtay in Meles Zenawi looga baahan yahay inuu joojiyo xayiraada uu ku soo rogay suxufiyiinta caalamiga ah ee Ogaadeenya tegaya, isla markaana uu Qaramada Midoobey u oggolaado inay hubiso dhibaatooyinka aan ka sheegayno Ogaadeenya. Waxay kaloo JWXO codsatay in Ururka Laanqayrta Cas mar kale loo oggolaado inuu ka hawlgalo dalka Ogaadeenya.�
Shirkii jaaliyadaha North America iyo Ururka iskuxidhka Dhalinta Ogadenya oo ka socda Minneapolis.
Gobolka Menisota ee wadanka Maraykanka waxaa guul kusoo dhamaaday shirkii Jaaliyadaha Ogadenya Ee North America & Midkii Ogaden youth network,shirkaas oo ka dhacaya magaalooyinka mataanaha ah ee Mineapolis iyo Sct Poul ayaa waxaa ka qayb galaya wafti balaadhan oo uu hogaaminayo Gud.Jwxo Adm.M.Omar,ayna kamid yihin H/A/Dibada Mudane Cabdiraxmaan Mahdi & dhamaan Masuuliyiintii Golaha dhexe ee Kunool North America,Shirku Wuxuu Furmay sabtidii Wuxuu ahaa Shir si heer Caalami loo soo diyaariyay.
Shirkan ayaa leh laba waji oo kala ah: Qayb Xuquuqul Insaanka Ogadeenya & Siyaasada ethiopia Martidii Ka kala Hadashay Oo Ka kala Socday Ururu Caan ah oo Xuququl Insaan Sida Human Rights Watch, ururada Advococy(qareenada) sida Kan Gambeelada & African American Waxaa Kaloo Kamid ahaa Xildhibaanada Sida Xafiiska Governor-ka & Seneter-ka Waxaa Kaloo Joogay Madax Kasocotaya Amxaarada, Oromada, iyo ONLF oo Hogaanka
HAD Khudbad dadka ka oohiska ka jeediya Kobtaas dhamaantood hogaamiyaashan shirka kahadlay Waxay umadii Timid & Caalamkii Tuseen Xaalada ogadeenya in aan indhaha laga qabsan karin Shirkaasina .
Sidoo kale waxaa maalintii Axada ahayd guul kusoo dhamaaday shirkii dadwaynaha Ogadenya Waxaa Halkaa Ka hadlay Gud.Adm.M.Omar, & Canbaro Axmed iyo Mayorka Gaarisa iyo Madax kalaba Kana Guul laga yaabay ayuu kusoo dhamaaday